Taliyaha ciidanka Asluubta oo sheegay in cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay xabsiga dhexe ee Muqdisho – idalenews.com
Taliska ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho iyadoo uu u geeriyooday hal ruux kuwo kalane ay haatan la ildaran yihiin.
Taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Xuseen Xasan Cusmaan oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta xabsiga ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in cudurka shuban biyoodka ah uu ka dilaacay xabsiga haatane uu u geeriyooday hal ruux afar kalane ay la ildaran yihiin, waxa uuna ugu baaqay dowladda Soomaaliya gaar ahaan waaxda caafimaadka in ay gurmad la soo garaan si aysan ugu fidin maxaabiista kale.
Dhanka kale taliyaha ayaa uga digay dadka ku howlan dhismaha xarumaha ay leeyihiin ciidamada asluubta in ay joojiyaan hadii ay ka dhaga adeegaana la horkeenayo sharciga.
Ugu dambeyntii waxa uu xusay in dhowaan dhismo laga bilaabayo qaar ka mid ah xarumaha ciidamada asluubta oo ay ka mid tahay xabsiga keydsaney, gurigii taliye ku xigeenkii hore ee ciidamada asluubta, xarumahii agoonta ee Afgooye iyo goobo kale, waxa uuna ugu baaqay dadka dagan in ay ka guuraan.
Afhayeenka baarlamanka oo ka qeyb galay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday dhameystay waxbarashada mastar-ka